Ny Galoà “Y Wladfa”: Ohatra Tsy Fahita Firy Amin’ny Voanjo Vahiny Miaina Am-pilaminana Any Amerika Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2015 12:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, Deutsch, Ελληνικά, Español
Ilay trano voalohany tany Gaiman, Chubut, Arzantina. Sary: Pablo Flores (CC BY-NC-ND 2.0).
Nanomboka tamin'ny 28 Jolay 1865 ny iray tamin'ireo fifindrà-monina nahazendana indrindra. Fantatra amin'ny teny Espaniola hoe La Colonia (Ny Tanàna Voanjo), na amin'ny fiteny galoà hoe Y Wladfa, tsy hitady harena fa hitahiry ny fomba fiainany izay tandindonin-doza any an-tanindrazany ireto olona 150 niala tany Pays de Galles ho any amin'ny Faritanin'i Chubut any Patagonia Arzantina ireto.
Manazava ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ny Tantaran'i Patagonia i Ben Johnston :
Tamin'ny fiandohan'ny taona 1800, nivoatra ny indostria tao anivon'ny tanin'ny Galoà ary nanomboka niha-very ny fiarahamonina ambanivohitra. Io indostria io no nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny fivoaran'ny Revolisiona Indostrialy tamin'ny famatsiana arina, vato solaitra, vy ary vifotsy. Betsaka no nihevitra fa hatelin'i Angletera tsikelikely i Pays de Galles ary angamba kivy tamin'izany fijery izany, na nentanin'ilay fisainana ainga vaovao anaty tontolo vaovao ireo Galoà lahy sy vavy ka maro no nanapa-kevitra hitsapa ny vintany any amin'ny firenena hafa.
Matetika niteraka korontana sy herisetra ny fahatongavanà Eoropeana any amin'ny tanibe Amerikana, saingy tsy tahàka izany ity.
Mamintina ny tantaran'io famoronana tanàna voanjo io ny Fikambanan'ny Galoà-Arzantina :
Dimampolo taona taorian'ny fifindràn'ny Galoà monina, no nanorenana ny tanànan'i Puerto Madryn any Bahía Nueva, Rawson, Gaiman, Trelew hatrany Dolavon any amin'ny lohasahan-driakan'i Chubut, ary Trevelin any Valle Hermoso (Cwm Hyfryd) any Andes, amin'izao fotoana izao. Taranaka Galoà maro no mbola miaina any Esquel, any am-pototr'i Andes ; any Comodoro Rivadavia, ilay tanàna lehibe indrindra any amin'ny faritany ; any Colonia Sarmiento ary manerana ny Repoblika.
Namorona fiarahamonina miroborobo izay nisitrahan'ny fiteny Galoà ny sata manokana ireo Galoà.
Malaza noho ny lohasahany i Pays de Galles, ary araka ny rakitr'i Crónicas del sur del mundo, dia faritra mitovy amin'izany ny any Patagonia izay nanome fonenana vaovao ho an'ny voanjo mpifindra monina :
Gaiman no tanàna voalohany naorin'ireo Galoà 150 izay niantsona teo amin'ny manodidina an'i Puerto Madryn amin'izao fotoana izao, ary nanapariaka ny kolontsainy nanerana ny lohasahan-driakan'i Chubut ka hatrany Cordillera, tamin'ny fanjanahana mifototra amin'ny fiaraha-miaina amim-pilaminana miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina indizena.
Tsaroan'ny firenena nandray azy am-pitiavana ireo mponina vaovao taloha :
Hafa mihitsy ny antony nanosika ireto voanjo mpifindra monina ireto. Tsy mpitsangatsangana hizaha ny tanàna tsy azo antoky ny Tanànan'i Caesars izy ireo, na mpikaroka volamena mirenireny entin'ny filàn-karena mora azo. Tsy mpahay siansa naniry ny hahazo fahalalana sy laza izy ireo. Vondron'olona izay te-hitahiry ny fomba fiainany tandindonin-doza any amin'ny tanindrazany izy ireo ary ninia nikaroka toerana ahafahany manangana firenena Galoà iray vaovao. Tany sy fanajàna ny fiteniny, ny fivavahany ary ny fomba amam-panaony no nangatahan'izy ireo. Takalon'izay hanangana ny saina Arzantina sy hankatò ny lalàna mifehy ny fireneny vaovao izy ireo.
Fiangonana Bethel , Gaiman, Chubut. SARY: Pablo Flores (CC BY-NC-ND 2.0).
Toetra iray mampiavaka ny vahoaka Galoà any Patagonia ny fivavahany, arak'izay asongadin'ny fiangonana Galoà iray azon'ny mpizahatany tsidihana amin'ny andaniny sy ankilan'ny moron'ny renirano Chubut :
Ry zareo samy zareo ihany no miteny fa : ” Raha Anglisy no tonga amin'ny toerana anankiray dia ny raharaham-barotra no atsangany voalohany. Rehefa Amerikana no tonga amin'ny toerana iray dia azo antoka fa sekoly no atsangany. Fa rehefa ny Galoà no tonga amin'ny toerana iray dia ny trano fiangonana no haoriny voalohany. “
[…] Ny trano fiangonana Galoà, rindrina biriky tsotra ny lafin-trano ivelany ary misy tapenaka vifotsy ny tafony, no mampiavaka ny tanàna rehetra naorin-dry zareo any Chubut. […] Tsy foibem-pivavahana ihany anefa izy ireny fa an'ny sarambabem-bahoaka, fanabeazana, eny hatramin'ny fitsaràna ihany koa aza.
Ho fahatsiarovana ny faha-150 taona nidiran'ny Galoà mpifindra monina voalohany tany Arzantina, dia naseho an-tsehatra ny famerenana ny fiantsonan'i Mimosa, ilay sambo izay nitondra ireo vondrona mpifindra monina voalohany. Manatrika izany sy ireo fotoana hafa miaraka amin'ireo vahiny nasaina ny governoran'i Chubut, Martin Buzzi, sy ny Praiminisitra Galoà, Carwyn Jones.
Nandefa sary sy lahatsarin'ilay fankalazana ny tsingerintaona faha-150 taonan'ny La Colonia tany Patagonia any Arzantina ao amin'ny Twitter ireo mpisera :
Nankalazain'ny kolontsaina any Chubut ihany koa miaraka amin'ny fampisehoana lehibe ny faha-150-taonan'ny nahatongavan'ny Galoà mpifindra monina…
Avy any Puerto Madryn izahay no nandeha 700 km ho any Esquel omaly.
Ireo Galoà lahy any Chubut, 150 taona izay no nahatongavany tany Arzantina. Ao amin'ny Crónicas ny lahatsoratro sy ireo sary maromaro…